Neymar Oo Si Lama Filaan Ah Uga Jawaabay Hadii Uu Doonayo Kusoo Laabashada Barcelona
Abdirahman	 Nov 29, 2018
Saacadihii ugu dambeeyay waxaa laysla dhex-marayey warar xan ah oo ku saabsan in Neymar uu quudareenayo kusoo laabashada Barcelona, ee wadanka Spain. Si lamid ah, waxaa jiray majaladdo qaar oo qorayay in xidigaan reer Brazil ay suurtagal…
Neymar Jr Oo Magacaabay Xidiga Kaliya Ee Isaga Ka Fiican Xili Uu Ka Hadlay Rajadiisa UCL
Neymar ayaa shaaciyay in Lionel Messi uu yahay ciyaaryahanka kaliya ee isaga ka wanaagsan marka ay timaado qiimayn ku saabsan laacibka dunida ugu fiican. "Aniga, ma arko xidig aan ahayn Lionel Messi," ayuu yiri Neymar, kaasi oo wareysi…
Neymar Oo Si Adag U Dhaliilay Garsoore Bjorn Kuipers Xili Xidiga PSG Uu Fahfaahin Ka Bixiey Sababta
Abdirahman	 Nov 7, 2018
Ma ahan markii ugu horeysay, Neymar ay isku dhacaan garsooraha reer Holland ee lagu magacaabo Bjorn Kuipers. Labadooda ayaa sidoo kale waxay isku dhaceen kulan Brazil la ciyaartay Costa Rica Koobka Adduunka, taasi oo ka dambeysay markii…
Tababaraha Barcelona Oo Si Lama Filaan Ah Uga Jawaabay Hadii Ay Dib Ula Soo Saxiixinayaa Neymar
Abdirahman	 Oct 20, 2018
Iyadoo ay jiraan warar iskhilaaf ah oo ku saabsan suuqa kala iibsiga iyo mustaqbalkiisa, Ernesto Valverde ayaa wajahay saxaafada ka hor inta uusan Barcelona u safrin Sevilla ee ka dhacaya Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Barcelona ayaa…
Lucas Vazquez Oo Cadeeyay Mowqifkiisa Ku Wajahan Inay Real Madrid Lasoo Saxiixato Neymar
Abdirahman	 Oct 19, 2018
Ka dib markii uu ka qeyb galay kulankii todobaadkii ciyaaraha ee Madrid Khamiistii, Lucas Vazquez ayaa ka hadlay qaabka Real Madrid ee haatan qaab ciyaareedkiisa iyo sidoo kale wararka xanta ah ee lala xiriirinayo xiddiga reer Brazil…
Neymar Oo Wali Doonaya Kusoo Laabashada Barca Iyo Sababta Uu U Doonayo Ka Tegista PSG Oo La Ogaaday
Abdirahman	 Oct 17, 2018
Weeraryahanka Paris Saint-Germain, Neymar ayaa lagu soo waramayaa inuu doonayo inuu kusoo laabto Barcelona. Neymar oo 26 jir ah ayaa dhaliyay 105 gool 186 kulan oo uu u saftay Barca intii u dhaxeysay 2013 ilaa 2017 ka hor inta uusan…
Neymar Oo Magacaabay Liiska Saddexda Xidig Ee Sanadkaan Ugu Cad-cad Hanashada Ballon d’or
Abdirahman	 Oct 4, 2018
Laacibka PSG ee Neymar Jr ayaa wuxuu aaminsan yahay in isaga uusan kasoo muuqan karin laacibiinta saddexda ugu dambeysay ee ku tartami karta sanad ciyaareedkan hanashada Ballon d'or. Luka Modric ayuu ka dhigay magaca koowaad, taasi oo…
Neymar Afka Furtay: “Ma Rabo Inaan Inta Ka Harsan Nolasheyda Calaan-calo Halkaan Sabab…
Abdirahman	 Oct 2, 2018
Brazil ayaa koobka aduunka 2018 waxaa looga soo reebay wareega Sideed dhamaadka, balse xidiga PSG ee Neymar ayaa ku adkeysanaya in mustaqbalkiisa inta ka badan uusan dooneyn inuu calaan-calo. Xulka lagu naaneeso Selecao ayaa waxaa 2-1…
Tababare Tite Oo Shaaciyey Hal Sabab Oo Ku Qasabtay Inuu Neymar Ka Dhigo Kabtanka Brazil
Abdirahman	 Sep 8, 2018
Xidiga PSG ayaa loo magacaabay kabtanka Joogtada ah ee xulka Brazil, kadib bilooyin oo uu wadankaan ahaa hogaamiye la'aan. Neymar ayaa door hogaamineed ku lahaa Jaalayaasha tan iyo wixii ka dambeeyay markii ay ka fadhiisteen xidigo waa…
RASMI: Tababare Tite Oo Magacaabay Kabtanka Joogtada Ah Ee Xulka Qaranka Kubada Cagta Brazil
Abdirahman	 Sep 7, 2018
Adenor Leonardo Bacchi, oo si wayn loogu yaqaano Tite ayaa wuxuu Neymar usoo xushay inuu noqdo hogaamiyaha garoonka ee xulka qaranka Brazil. Thiago Silva ayaa horey usoo ahaa kabtanka dalka Qaarada Latin America ku yaala, laakiin waxaa…